Soro otu na Element Society (ọrụ anyị) (gụnyere ọrụ NCS)
Ị hụrụ n'anya isoro ndị na-eto eto na-arụ ọrụ ma na-ahụ na ha ga-enweta ihe a na-apụghị ikweta ekweta? Gbalịa tinye aka n'òtù anyị!
Na-arụ ọrụ na Element Society ị na-enyere ndị na-eto eto aka inweta ihe a na-apụghị ikweta ekweta, ị ga-eme ka ndị na-eto eto gbanwee obodo ha, bulie ọchịchọ nke onwe ha ma bụrụ ndị nlereanya nke ndị ọgbọ ha.
Element Society bụ ọrụ ebere edenyere aha (nọmba: 1157932), ụlọ ọrụ e debara aha na njedebe (nọmba: 08576383) na onye na-ahụ maka ndebanye aha (UKPRN: 10047367).
Element Society kwadoro ichebe ụmụ na ndị na-eto eto.
Element Society bụ Ohere Ohere na-arụ ọrụ.
Ùnu bu ndi mmadu na-enwe obi uto ime ihe di iche?
Ahụmahụ NCS na-agbanwe ndụ agaghị ekwe omume n'enweghị ọrụ siri ike nke ndị ọrụ nnyefe mmụọ anyị.
Ị nwere ike ịbụ akụkụ nke usoro ntorobịa a na-enweghị atụ. Ndị ọrụ anyị n'oge anyị nọ na NCS, anyị na-enwekwa obi ụtọ maka ọtụtụ puku ndị na-akpali, na-eduzi ma na-akpali ndị na-eto eto na njem NCS ha. Ihe ịga nke ọma nke NCS agaghị ekwe omume na-enweghị agụụ na nraranye nke oge ndị ọrụ NCS anyị.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke ọ bụla n'ime ọrụ ndị a biko budata akwụkwọ ndị e dere n'okpuru na e-mail ụdị ngwa ngwa na NCS Team na - ncs@elementsociety.co.uk
Ụdị Ụdị Job
Oge mmechi maka ngwa - Tuesday 26th February 2019.
Biko gụọ ihe ọmụma niile nke ọma ma chọpụta na ị dị maka akara ụbọchị n'ime nkọwa ọrụ.
KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ KWESỊRỊ
Anyị na-achọ ka anyị na ndị nwere mmasị na-akwado ndị na-eto eto na-arụkọ ọrụ iji nweta ihe a na-apụghị ikweta ekweta.